राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी पूरा, मतदान भोलि बिहान ९ देखि ३ बजेसम्म
हरि भक्त श्रेष्ठ ,
प्रकाशित: २०७६ मङ्सिर ९, साेमबार
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहाको दरबार बहिगर्मन पश्च्यात , नेपाल लगायत विश्वमा नै रहेका जनताको ध्यान उनीतिर खिचिएको थियो। साना साना चिया पसल देखि , दोहोरी र डिस्को थेग सम्ममा राजाको त्रास कायम थियो ।
पचासौ बर्ष साशनबाट उन्मुक्त पाएका जनता अझै न पुलिस प्रति न त सेना प्रति विश्वस्त थिए।समयकाल र परिस्तिथीवस सारा प्रसासन सयन्त्रले लोकतन्त्रको विधि र जनताको सर्वोचता स्वीकार्न बाध्य भयो ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मिठास र छुटमा पूर्व राजालाई स्वतन्त्र नागरिक भएर बाच्ने, व्यापार गर्ने, आफ्नो सम्पती होस वा सन्तती सँग रमाउने पुर्ण स्वतन्त्रता छ । यहि नै लोकतन्त्रको मिठास हो, कुनै पक्ष वा बिपक्षलाई हानी, नोक्सानी नगरी हास्न, नाच्न र गाउन पाइन्छ ।
अब यसमा पूर्व प्रधानमत्री पुष्पकमल दाहालको नाममा नाच, गान गरेकोसँग जोडिनु बुद्धि जिबीका अलि बिष्लेषण नपुगेको मेरो ठम्याई छ। ईतिहास गवा छ । कागतालीबाट मिलेको सिंहासन र जनताको बलीदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रका लोहपुरुषहरुको जनता जगाउने नाच र एउटा फुर्सदिलो समयलाई पारिवारिक वातावरणमा रमाउने नाचको कहि कतै समानता हुन सक्छ ।
यूटुव भिडियो र यूटुव टि.भी.मा TRP बढाउने भन्दा, यहाँहरुको धृष्टताले कहि कतै केहि नापिहाल्छ जस्तो आम सर्वसाधरणले सोचेका छैनन् । कुनै कुनै पार्टीले राजा बोक्दा तुक्का परिहाल्छ कि , भन्ने सोच्ने पनि संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालमा छुट छ । कुनै कुनै बुद्धिजिबी डाक्टर पनि लेख्छन , उनिहरुलाई पनि छुट छ । यदि पूर्व राजाको शासनकालमा यस्तै विरोद गर्न पाइन्थ्यो ।
बिरोध गर्नुस तर सरकारमा पञ्चायतकालले कति वर्ष राज गर्यो र गणतन्त्र आएको कति वर्ष भयो । यस्ता, साना साना कुराको हेक्का राखेर यूटुबे च्यानलमा सेलेब्रेटी बन्दा हुन्छ । कसैको मान मर्दन गर्न पायो भन्दैमा जे पनि भन्ने , जस्लाई पनि गाली गर्ने हो भने छिट्टै राची जाने अवस्था आउला स्वास्थको पनि ध्यान दिनुहोस । कसैले पनि गर्ने राम्रा कुराको सर्मथन र नराम्रा कुराको बिरोध सामाजीक मान्यतामा पचाउन सक्ने किसिमले गर्नुहोस ।
मैले रोपेका शब्दहरु कसैको चाकरीकोलागी पनि हैन । त्यसरी नबुजिदिन म हार्दिक निबेदन गर्दछु । तपाई बुद्धिजिबी ज्ञानका कुरा अर्ती बुद्धि दिन खोज्नु हुन्छ, बुद्धिजिबीले टिपेका र बोलेका शब्दहरु उच्चकोटीका हुन्छन् हेक्का रहोस ।
पूर्वराजा संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालमा खुशी हुनुहुन्छ । यसरी नै रमाएर राष्ट्र र नेपालीको मुहार उज्यालो बनाउने, समृद्धिको भुमिकामा सहयोग रहने छ, भन्ने हामी नेपालीले आशा गरेका छौ ? उहाँ तथा परिवारको नाच रमाईलो लाग्यो , खुसी बाड्दा खुसी बढ्छ ? स्वास्थ सधै यस्तै रहोस पूर्व राजा तथा परिवारलाई हार्दिक शुभकामना ।